Qorshaha Hirgelinta iyo Jadwalka Doorashada 2016 (Akhriso) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Janaayo 26 (Mareeg)— Waxaa la soo bandhigay Jadwalka waqtiyeedka doorashooyinka sanadkan 2016 ka dhacaya Soomaaliya, kaasoo laga soo saaray shirkii Madasha Wada-Tashiga qaran ee shalay lagu soo gaba gabeeyay magaalada Baydhabo.
Jadwalka la soo saaray ayaa dhigaya waqtiga ay dhacayaan doorashooyinka Guddoonka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha, xilliga la soo xulayo labada aqal ee Baarlamaan, ololaha doorashada Madaxweynaha.
Hadaba waxaa halkan idin kugu soo bandhigeynaa Jadwalka doorashada:-
4-ka June Dib u eegidda iyo dhamaystirka liiska 135ka odey dhaqameed ee hadda jira. Madasha Hogaanka Qaranka (MHQ)
14-15 ka July: Dhegeysiga khudbadha murashaxiinta u tartamaya Aqalka Sare. Baarlamaanada Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka.